☺ ငြိမ်းဇေဦး : 07/01/2008 - 08/01/2008
အပိုက်ခံချင် နေပြီ ဆိုတဲ့ ဆုဖလား ကြီး
ထာင့်ကန်ဘော လို အလစ်မှာ
နွေးကနဲ ရင်ဘတ်ထဲ အရှိန်နဲ့ဝင်လာလိုက်တဲ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ ဘယ်သူမှ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရဖူးတဲ့
ဒါမှမဟုတ် အကုန်လုံး ချောင်ထိုးထားတဲ့
ဒါမှမဟုတ် ဆတ်ဆော့မိလို့ပါဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပြန်ချသွားတဲ့ ဆုဖလားကို မှ
ဘ၀နဲ့ မြတ်နိုးပါတယ်ဆိုလား ...
အဲ..အဲ... အဲဒီ နုထွား လေးကို
မိန်းမရေ ကလေး ငိုနေပြီ ....
ငိုနေပြီလို့ တကျီကျီ ပြောပစ်ချင်ပြီ ..။
ပဲပုတ် ကြမ်းနဲ့ ရှမ်းဆန်ကိုချစ်တယ်....
မီးလင်းဖိုဘေးက အခါးရေကြမ်း နဲ့ ညတွေကိုချစ်တယ်...။
သိပ်အေးတဲ့ဆောင်းမှာ ဂွမ်းကပ်စောင်ထဲက ညကိုချစ်တယ်...
အားလုံးထက်ပိုပြီး မွန်းဆန်ဟွန် ကိုချစ်တယ်...
တောင်တန်းတွေတောင် ညိုမှောင်လို့ 
ငိုအောင် ပြုစားတဲ့ ညတွေကိုချစ်တယ်
ကြက်တူရွေးများ နှင့် အချဉ်ပေါက်မှု
အဲဒီ ဖွင့်ဆိုမှုတွေ ပလူပျံနေတဲ့ ရပ်ဝန်းကြီးထဲမှာ
အပြုတ် အချဉ်တွေ ....
အဟုတ်ပင် ရွာရွာချနေလိုက်တာ မစားရ ၀ခမန်း...။
အတိအကျ ကတော့ မျက်နှာကို တံတွေးနဲ့ ပက်နေသလိုပါ။
အနာဂတ် ဆိုတာ ဟိုဟာ
ပစ္စုပ္ပာန် ဆိုတာ ဂလိုပါ...။
အလာဟ်အရှင် က ဟောဒါ
မစ္စတာ ကွန်ဖြူးရှပ်က ဟောသလို
အဲသလို မိုးလုံးညံအောင် အော်တောင်းပန်ရမှာလား...။
ကဲ လေ ထူးပါဘူး
ဒို့ မြို့ က စိတ္တဇဝေဒနာသည်ကြီး ဒေါ်ပုမ က
“ဘ၀ဆိုတာ ဟောဒါဟဲ့ ဟောဒါ”လို့
ဈေးလည်ခေါင် လူစည်စည်မှာ အော်အော် ရယ်တာကိုပဲ
ပုဆိုးလည်ပင်းသိုင်းရင်း ခပ်ရိုင်းရိုင်း ကိုးကားလိုက်တော့မယ်
တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာ ဟောဒါဟဲ့ .. ဟောဒါ.......။
ခါ..ခါ..ချ ခဲ့ ချိန်
မှေးမှိန်မှိန် သေးသိမ်သိမ် အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်
မျက်လုံးတွေ ယောင် ရ စိတ်တွေ ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ရ
ဖာလာပင်တွေအောက်မှာ တခေါက် အိပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုယုံနဲ့
ကွမ်းယာသည် ရဲ့ ဈေးတွက် ကို နားလည်မတဲ့လား
စိတ်ကူးယဉ်နဲ့ ကာကာကုလားကြီးလိုလဲ လေထဲ တိုက်အိမ်ဆောက်သေး။
ညရထား ပေါ်မှာ တခါအိပ်ဖူးယုံနဲ့
ရထားပေါ်က ဘ၀တွေကို ရွာတည်ပြီး
မဆုံးတဲ့ခရီး ကို ထွက်ခဲ့ချင်တာကိုလဲ
အဲသလို သံယောဇဉ်က လွယ်လွယ်နဲ့ ခိုင်တတ်သေး။
ဆင်တကောင်လောက်ကြီးမားတဲ့ အရှုံးတွေ တောလိုပေါက်
တောင်လိုပုံ ခဲ့ရပြီ ဆိုမှ
အိပ်မရ .. အထိတ်တလန့် နာကျင်ပူဆွေး
အဲသလိုလဲ ရှုံးပြေးပြေးရင်း ပန်းဝင်တတ်သေး။
ကြွေတာမှ ဝေ့... ဝေ့...၀ဲ..၀ဲ
ဖွဲ ကနဲ လေထဲ မျောလို့ ကကြိုးလေးတခု လို ငြိမ့်ငြိမ့်လေး...။
အရှုံး.... အနိုင် ...အောင်မြင်မှု
တခုမှ တကယ်မရှိတဲ့ အရာ
နေခြင်း..သေခြင်း ..ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းတရားဟာ
သင်္ခါရ မှော်ပညာဆိုတာသိလာတဲ့အခါ
လေညှာမှာ အသင့်နဲ့ ကြွေခွင့်ကို ပဲ စောင့်ပြီး
အဲသလို ကိုယ့်စိတ်ဓါတ် ကြွက်သားတွေ ခပ်လျော့လျော့နဲ့
နွေဆို အဲဒီ စိန်ပန်းပင်ကြီးက ပွင့်လိုက်တာ ရဲ ကနဲ
အဲဒီစိန်ပန်းပင်ကြီးဟာ ကတ္တရာ လမ်းမအဟောင်းကြီးကို
ကတ္တရာလမ်းမကြီးကို စိန်ပန်းပင်ကြီးက စကားပြောနေကြ...
ကတ္တရာလမ်းမကြီးဟာ တခါတခါ တော မြင်းလှည်းတွေဖြတ်သွားပြီးကာစ
သုတ်.. သုတ် ..သုတ်..သုတ်နဲ့ ဈေးသည်တအုပ်
ခေါင်းပေါ် တက်နင်းထားတဲ့ ခံတောင်းကြီးတွေ ကို
မြို့လည် ဈေး ကို ပြေးနေကြ.....။
တညလုံး မထပဲအိပ်တဲ့ ကင်းသမားဟာလဲ
ပုလင်းပါးပါးလေး ကို လက်ဝါးနဲ့ရိုက်လို့ သွားမတိုက်ခင်
တစက် နှစ်စက် တင်ကျန်နိုင်သေးတဲ့ တောအရက်ကို
အဲဒီ စိန်ပန်းပင်ကြီး ကို ရှင်သန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ခြံကလေးထဲက
သြကာသ သြကာသ နဲ့ မောလာသမျှ
လောကဓံ အညစ်တရားကို အပြစ် စကားမဆိုပဲ
ဂေါတမ ကို ရှိခိုး ဦးတင် သံ တခု
မနက်ခင်းကို အစပြုနေကြ ....။
ဒါပေမယ့် ..... တခါဖူးမျှ ဆုတောင်းပုံမရတဲ့
အဲဒီ အဘွားကြီးဟာ ...
သူ့ နွမ်းပါးမှုကို ကျမ်းများပြုရမယ်ဆိုရင်
ရုပ်ဝတ္ထုကလွဲလို့ စိန်လိုဖြူတဲ့ အသည်းတစ်မြွှာပိုင်တယ်
သံသရာ ၀ဲသြဃမှာ ပုလဲ မနောမယနဲ့
လေပြေသက်ပြင်းတွေနဲ့ သူ့ အပွင့်တွေကို ခြွေခြွေချတဲ့အခါ
ဇာတက ဟောင်းတွေ သင်ဦးတော့မယ်လို့
စစ်ကား တစင်းဖြတ်နင်းသွားတဲ့ ကတ္တရာလမ်းမ က
ထ ..ထ ..အော်တတ်ရဲ့...........။
အဲသလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်မှာ
ဆရာမ ဟာ ဘာမှ ပြောစရာမရှိသလိုငြိမ်သက်မှုနဲ့
မြန်မာစာကို ဖတ်တတ်ရေးတတ် တွေးတတ် ဖန်တီးတတ်ရန် သင်ကြား ပေးခဲ့သည် ကျေးဇူးရှင် ဆရာမ ဒေါ်လှခေါ် ကဗျာ ဆရာမ စာရေးဆရာမ မလေးချို အား ဤ ကဗျာဖြင့် ပူဇော်ကန်တော့ပါသည်။
မပိုင်သာ အလွမ်းနဲ့ ဒီဇိုင်နာ ဘရန်း
ရုံးမှာ ပင်ပန်းလွန်းလှသည်။ တနေ့ တနေ့ မိုးလင်းက မိုးချုပ် ကော်ဖီသောက်လိုက် အပေါ့သွားလိုက်
ဗီဒီယိုကွန်းဖရင့် လုပ်လိုက် ဆေးလိပ်ထွက်သောက်လိုက်၊ နေ့လည်စာထွက်စားလိုက် ဟိုသည်လျှောက်ကြည့်လိုက် ပြန်လာလိုက် ၊ ကွန်ပြူတာ ကို စကားဝှက်တွေရိုက်ထည့်လိုက် ၊
ကိုယ့်ရုံးခန်းရှေ့မှ ဖြတ်လျှောက်သွားသော လေပေးဖြောင့်သည့် တယောက်ယောက်ကို မြင်လိုက်လျှင်
အတည်ပေါက်ဖြင့် ဟာ သ မမြောက်သော စကားများဖြင့် လှမ်းနောက်လိုက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သဘောကျပြီးရယ်လိုက်ဖြင့် အလုပ်ချိန်ကုန်ပြန်တော့ ကိုယ့်ရုံးခန်းတံခါးလေးသော့ခတ်ကာ ကားရပ်ထားရာ နေရာသို့ မလှမ်းချင်လှမ်းချင်ဖြင့် လှမ်းလာရင်း ကားရပ်နားရန်နေရာတွင်တွေ့သော
သူငယ်ချင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်ယောက်အား အရင်ကမှ မလှသော မျက်နှာကြီး ကို ရှုံ့မဲ့ကာ
“သိပ်ပင်ပန်းတာပဲ…”ဟု ခေါင်းခါရင်း ငြီးပြနေကြ….။
ဒီနေ့တော့ Saks Fifth Avenue ဖက်ကို ခဏလောက်သွားလိုက်ဦးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ကားထဲဝင်ထိုင် လေအေးစက်ကလေးကိုဖွင့် ဓါတ်ပြား အသစ် တစ်ခု ကို ဓါတ်ပြားစက်ထဲထည့်ကာ
နောက်ပြန်ဂီယာထိုးရင်း နောက်သို့ ဆုတ်လိုက်၏ ၊ပြီးတော့ နံပါတ်တစ်ဂီယာထိုးကာ အလိုအလျှောက် ဖွင့်သောပိတ်သော မှန်တံခါးခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်း လက်တဖက်မှ သူများ အလကားလက်ဆောင်ပေးသည့် ဇစ်ပို မီးခြစ်ကို ခြစ်ကာ စီးကရက်ကို မီးညှိလိုက်ရင်း ဂီယာကို ပြောင်းလိုက်၏။
လမ်းဘေးဝဲယာမှ ကားကြီးကားငယ် များကို ကြည့်ရင်း နောက်ဆုံးတွင် Saks Fifth Avenue
ကား ရပ်ရန်နေရာသို့ ရောက်လာ၏။
ကားကိုရပ်ကာ မိမိမျက်နှာနှင့် တစက်မျှ မလိုက်ဖက်သော John Varvatos နေကာမျက်မှန်ကို နောက်ကြည့်မှန်တွင်ချိတ်ထားရာမှ ယူတပ်ရင်း အဆီပြန်နေသော မျက်နှာအား တစ်ရှူးပေပါအနည်းငယ်ဖြင့်သုတ်လိုက်ပြီး ကားတံခါးကို ဖွင့် ၊ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ကာ လေးငါးဆယ်လှမ်းလောက်လှမ်းပြီးမှ လူ တကာက မိမိ၏ infiniti G 35 ကလေးကို မျက်စိစူးရောက်စေရန် Remote control သော့ပိတ်စနစ်ဖြင့် “တီ…တီ”ဟူသော အောက်ကလိအာ အသံထွက်စေကာ ပိတ်လိုက်၏ ။
အတွင်းထဲရောက်တော့ Valentino Roma ဖက်လှည့်ဖြစ်၏ Prada ဖက်လှည့်ဖြစ်၏ ခပ်ဈေးပေါပေါ coach နှင့် Juicy Couture ဖက် ကို အားနားပါးနာ သွားငေးဖြစ်၏ ။ ထိုဆိုင်များက ခပ် နန့် နန့် ခပ်ပျံပျံ ဟာလေးများ ငွေကို ခြုစ် ခြုတ်စုကာ ၀ယ် ယူသုံးစွဲနေကြနေရာလေးများဖြစ်သဖြင့် ကရုဏာတရားရှေ့ ထားကာ အနှီ မဒီကလေးများအား အားနာပါးနာ စိတ်ဝင်စား ဟန်ဆောင်သောမျက်လုံးဖြင့် ငေး ကြည့်အားပေးရန်ဖြစ်၏။
မိမိ၏ Prada Leather Thong ခြေညှပ်ဖိနပ်အောက်မှပြောင်လက်သော ကြမ်းပြင်ကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုကာ မီနီစကတ်ကလေးများဖြင့် ကောင်မလေးတော်တော် များများ ရှပ် ပြာပြာ ဖြတ်သွားနေကျဖြစ်သည့် ရေပန်း အ၀ိုင်းကြီး ၏ ဘောင်ပေါ်တွင် မျက်မှန်ကို လက်တဖက်ဖြင့် ကိုင်ရင်း ထိုင်ကာ
တွေတွေ ငေးငေး စဉ်းစားခန်းဝင်နေသည့် ဟန်ဆောင်လျှက် ကြမ်းပြင်မှ ထင်ဟပ်သော အရာများကို မမှိတ်မသုန်ကြည့်နေမိ၏။
အိမ်ပြန်မှဖြစ်တော့မည်။ ဒီည စာ ကောင်းကောင်းချက်စားမှဖြစ်မည်။
ဒီတော့ အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ရင်း လမ်းတွင် ဓါတ်ဆီ နည်းနေပြီဖြစ်သော ကားအတွက် ဓါတ်ဆီဆိုင်တွင်ရပ်ရင်း
လေးထောင့် ပလပ်စတစ် အိတ်ကလေးများဖြင့်ထုတ်ထားသော အ၀ိုင်း ကွင်းလေးများ ဟု အထင်ရှိသည့် အရာလေးများအား စိတ်ရောက်သွား၏။ သေချာယူကာ ဖတ်ကြည့်တော့ Condom ဆိုပဲ….။
ထို အရာတို့သည် လောလောဆယ် မိမိနှင့် မည်ကဲ့သို့ မျှ ယာယီမသက်ဆိုင်သေးသောအရာများဖြစ်သဖြင့်….
ချစ်ရသူကလဲ တနယ်တမြေမှာ ဒီတော့ ထို ကိလေသာတို့၏ ထုတ်ပိုးရာဖြစ်သည့် ကိစ္စကိုလည်း ဝေးဝေးရှောင်မှဖြစ်မည်။
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဒီဇိုင်နာ condom လေးများမရှိကြဘူးလား မသိ….။
ဒီတော့ တခါ တွေ့ ဖူးသည့်အင်တာနက် ဆိုက်က အကောင်းဆုံး ကွန်ဒွန်ဆုပေးတာကိုသွားသတိရမိပြန်သည်။
ဘာတဲ့ "Official Condom Tester Pool"ဆိုပဲ...ချစ်ရသူများ မရှိလို့ ကတော့ Quality Control မှာ အချိန်ပြည့်ဝင်လုပ်လိုက်ချင်ပါရဲ့…။
ဓါတ်ဆီဖြည့်ပြီးတော့ ကားကို ဖြေးဖြေးမောင်းပြန်လာရင်း မိတ်ဆွေတဦး ပြောပြသော သူ၏ တောင်ပေါ်မြေမှ condom ဇာတ်လမ်းကို ပြန်သတိရမိကာ ပြုံးမိပြန်၏။
ချင်းတောင်တွင် HIV , AIDS ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျမ်းမာရေးဌာနများမှ United Nations အစီအစဉ်ဖြင့်
Condom များဝေကြသည် ဆို၏။ ထိုအခါ ရွာလုံးကျွတ် ရှိသမျှ ယောက်ျားများအား သူကြီးအိမ်ရှေ့တွင် စုရုံးခေါ်ကာ မဟာ Condom သုံးစွဲနည်း ပညာပေးကြ၏။
ကျမ်းမာရေးမှူးက သူကြီးအိမ်ဘေး တွင် ထိုးထွက်နေသော ဘူးစင်မှ ၀ါးလုံး အား သေချာလက်ညှိုးထိုးပြလျှက်
“ခင်ဗျားတို့ ည ည…ခင်ဗျားတို့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အိပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဟောဒီ ပလပ်စတစ် အိတ်ကလေးကို ဟောသလို စွပ်ပြီးမှ အိပ်မယ်ဆိုရင် လိင်က ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အပြင် မလိုလား ပဲ ကိုယ်ဝန်ရှိလာနိုင်မှုတွေကိုလဲ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်” လို့ ရှင်းပြခဲ့သတဲ့…။
နောက် သုံးလလောက်ကြာတော့ အဲဒီရွာက ရွာသားတစ်ယောက်ဟာ မြို့ ကို ဒေါနဲ့မောနဲ့တက်လာပြီး ကျန်းမာရေးမှူးရဲ့ ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပါတော့တယ်….ပြီးတော့ မျက်နှာမာနဲ့“ခင်ဗျားပေးတဲ့ ပလတ်စတစ်အိပ်တွေလဲ စွပ်တာပဲ ဗျ ခုတော့ ဒုက္ခရောက်ပြီ ” လို့ ပြောသတဲ့.
ကျမ်းမာရေးမှူးက ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း ကျနော် သေချာပြသလို မလုပ်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောသတဲ့ အဲဒီအခါ အဲဒီ ရွာသားက ဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့“ လုပ်သမှသိပ်လုပ်တာပေါ့ ဆရာရယ် ညည မိန်းမနဲ့မအိပ်ခင် အပင်ပန်းခံပြီးအဲဒီဘူးစင်က ၀ါးလုံးမှာ သွားသွားစွပ်ရတာ ဆရာ ဝေခဲ့သမျှ ကုန်ပါရောလား”တဲ့လေ…။
အော် တကယ်တော့ ဒီဇိုင်နာ ဘရန်းတွေ ဘာဘရန်းတွေ ပဲဖြစ်ဖြစ် Condom ကို ဘူးစင်က ၀ါးလုံးစွပ်မိတာနဲ့ တူနေရင်တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါလား ဟု တွေးမိရင်း ကြွားချင်စိတ်ကို မြိုသိပ်ကာ ကားကို ကားရပ်နားရာနေရာလေးတွင်ရပ်လျှက် ခပ်ကုတ်ကုတ်ဖြင့် အိမ်ဖက်သို့ လှမ်းလာမိပါတော့၏။
သူမ၏ အောင်ခြင်း တစ်ပါး
ဒေါသတွေထွက် ခွေးရူး ရေပက်သလိုဖြစ်တတ်တဲ့ငါ့ကို
အမုန်းဝေးစွ ၊ ဟန်ဆောင်မှုဝေးစွ
ဘ၀ရဲ့အလှအပကို အရှိအတိုင်း မြတ်နိုးတတ်တဲ့..။
ခက်ထန်မှုတွေကြား ငါ ညပ် သေသွားမှာ စိုးရိမ်တဲ့...။
ဘုရားနဲ့ တရား စခန်းကြားမှာ
ငါ့လို ကျောမွဲ တောဘဲ ကို
သဘောလဲကျ မေတ္တာလဲ သက်ဝင်
ဖီလင်လဲ တက် တသက်လုံးလဲ ချစ်မတဲ့
သစ္စာကို မြို မြိုချ သွားခဲ့တာ
ပန်းချီကားထဲမှာ ပုန်းသွားတဲ့ ၀ိ ဉာဉ်
တိတ်ဆိတ်သော ည စာ စားခြင်း ပြီးဆုံးတော့.............
စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညှိပြီး ရှိုက်သွင်းလိုက်မိ၏................။
စီးကရက်မီးခိုးများကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်း မီးခိုးငွေ့များနောက်သို့ စိတ်အလျင်သည် အပ်နှင့်ထိုးဖောက်ခံလိုက်ရသော မိုးပျံပူဖောင်းကဲ့သို့ ကစဉ့်ကရဲ လွင့်စဉ် ယိုင်ထိုးကာ လွင့်ပါသွားတော့၏။
အိပ်ခန်းတွင်းသို့ ပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးနောက် အိပ်ခန်းတွင်းမှ ရုပ်မြင်သံကြား ကို ပိတ်လိုက်၏ ၊ စားပွဲတင်နာရီ မှ ဓါတ်ခဲများကို ထုတ်ပစ်လိုက်၏။ ပြတင်း လိုက်ကာ ကို ပိန်းပိတ်အောင် ဆွဲစေ့လိုက်၏။
အားလုံး ပြီးတော့...အပြင်ပြန်ထွက်ကာ အိပ်ခန်းတံခါးကို အသေအချာပိတ်လိုက်၏၊ ပိတ်လိုက်ရင်း ဖြူ လွလွ အိပ်ခန်းတံခါး ပေါ်က ပန်းချီကားကလေးကိုငေးကြည့်မိ၏။
တောတန်းလေး ... အ၀ါရောင် ရွက်ခြောက်များ...... တိမ်ရောင်တွေ ပါးပါးလေး ခြုံထားတဲ့ စမ်းချောင်းလေး ............စိမ်းနု စိမ်းရင့် စိမ်းမှောင် ၊ အစိမ်းရောင် အနုအရင့် မညီ့တညီ မြက်ရိုင်းပင်များ..၊
လေပြေတို့ တိုက်မနေ...... သစ်ရွက်တွေလဲ ထပ်မကြွေ.....။
စမ်းချောင်းလေးလျောတိုက် မဆင်း ၊ တိမ်တိုက်တွေလဲ ခရီးမထွက်..။
ဟိုး ခပ်ဝေးဝေး ညာဘက် တောတန်းအစပ်က တလူလူတက်နေသော မီးခိုးငွေ့ တန်း ပင်လျှင် ကြက်သေ သေ လျှက်................။
ပန်းချီကား ကလေးကို အသာဖြုတ်ယူလိုက်ပြီး အက်နေသော ရင် ဘတ်ထဲသို့ ဒဏ်ရာရ ယုန်လေးတကောင် ခြုံတွင်းခုန်ဝင်သကဲ့သို့ ထည့်လိုက်မိ၏ ။
ပြီးတော့........အိပ်မက်ယောင် ကာ လမ်းလျှောက်သူလို တရွေ့ ချင်း တလှမ်းခြင်း ဧည့်ခန်းသို့ လာခဲ့၏..လေးငါးလှမ်းမျှသော ခရီးတွင် မြစ်နှစ်စင်းစီးနေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရ၏ ထိုမြစ်သည် ပူနွေးသော စီးကြောင်းတို့ကို အသံမထွက်ပဲ စီးဆင်း၏။
ဧည့်ခန်းတွင်း က ဖန်မီးအိမ်ကလေးကို ဇာတိမဲ့ ဘ၀မဲ့သူတယောက်၏ လက်များကဲ့သို့ လက်လှမ်းယူလိုက်၏။
ဖန်ပြောင်းလေးကို ဟလိုက်ကာ အစိမ်းရောင် ဓါတ်ငွေ့မီးခြစ်ကလေးကို ခြစ်ကာ မီးညှိလိုက်၏ မီးညှိလိုက်ရင်း အလွမ်းတွေ သောကတွေ မောဟတွေ အားလုံးသော ခံစားချက်တွေများ ထိုကဲ့သို့ကျွမ်းလောင်သွားလျှင် ကောင်းပေတော့မည်ဆိုသည့်အတွေးက နွေခေါင်ခေါင် မီးသံချောင်းသံလို စိတ်ထဲတွင် လွှမ်းမိုးဆူညံလျှက်။
ပြီးတော့ ဧည့်ခန်း တစ်ခုလုံးမှာ ရှိသော လျှပ်စစ် ကိရိယာ ပစ္စည်းအားလုံးကို ပိတ်လိုက်၏ နောက်ဆုံးခံစစ်မှ ဆုတ်ခွာတော့မည့်သူတယောက်ကဲ့သို့..........။
ရေခဲသေတ္တာမှ တိုးတိုးညင်ညင်သာသာ အသံကိုကြားနေရ၏။ လေအေးစက်မှ ပင်ပန်းတကြီး ရုန်းကန် အမောဖောက်သံကပိုမို
လေအေးစက်ကို ပိတ်လိုက်၏ ရေ ခဲသေတ္တာ နောက်သို့ လက်လှမ်းကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်၏ ၊
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို ထက်ခြမ်းခွဲလိုက်သော ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်လိုပေါ့။
အားလုံးပြီးတော့ ကော်ဖီစက်ကလေးမှ အစိမ်းရောင် ဒစ်ဂျစ်တယ် နာရီကလေးက လင်းနေသေး၏။
ကော်ဖီ ဖျော်စက်ကလေးမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်ကြိုးကိုလဲ ဆွဲဖြုတ်လိုက်၏ တောက်တက်သမားတစ်ယောက်
ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆွဲတင်ပေးနေသည့် ကြိုးကို ဖြတ်ချ ခဲ့သလို ။
အရာရာ ငြိမ်သက် ငြိုးပျ ညို လျ ၀ိုးတ၀ါးဖြစ်သွားတော့ အခန်းပတ်လည်ကို သေချာပြန်ကြည့်မိ၏။ ဧည့်ခန်း မှန်တံခါးကြီး၏ လိုက်ကာ ကြား မှ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ယိုင်လဲ ကျနေသော အပြင် တောအုပ် အစပ် ဓါတ်မီးတိုင်မှ အလင်းရောင်တို့ကို မနှစ်မြို့စွာဖြင့်
လိုက်ကာကို သေချာ ဆွဲစေ့လိုက်ပြန်၏။
စီးကရက်တစ်လိပ်ကို ထပ်မီးညှိပြီး ... ဝေးလံသော ခရီးကြီးတစ်ခု ကို ဆက်လာခဲ့ရင်း လမ်းခုလတ် သစ်ရိပ်တစ်ခုတွင် ခြေပစ်လက်ပစ်နားနေသော ခရီးသွားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ထိုင်လျှက် အမှောင်ထုကြား တွင် ပျပျ လေး လင်းနေသော ဖန်မီးအိမ်ကလေး မှမီးညွန့် ကလေးကို ငေးနေမိ၏။
ပြီးတော့ ဂစ်တာ စင်ကလေးပေါ်မှ မဟော်ဂနီရောင် အလင်းရိပ်ပြေး နေသော ကလပ်စစ်ကယ် ဂစ်တာလေးကို လက်လှမ်းလိုက်ပြီး ပိုက်ထားလိုက်မိ၏။
ဂစ်တာမတီးဖြစ်ပဲ ဂစ်တာကြိုးပေါ်မှ ပုံပြင်လေးများအား ပြန်လည်ကြားရနိုးဖြင့် ပိုက်ထားသောဂစ်တာလေးအပေါ်မှ လက်မောင်းသားများပေါ် မေးတင်ရင်း မျက်လုံး နှစ်လုံးကို မှိတ်ကာ နားစွင့်ကြည့်နေမိရင်း ...ဖန်မီးအိမ်ကလေး ငြိမ်းသွားခဲ့သည်ကို မသိလိုက်တော့........။
အိပ်ခန်းထဲပင် ၀င် မအိပ်ဖြစ်လိုက်တော့.............။
တကယ်တော့........ အက်နေသော ရင်ဘတ်ထဲသို့ ထိုည က ကျွံ ကျခဲ့ပြီး...
မစီးသော စမ်းချောင်းလေးထဲတွင် တိမ်လွှာရောင်ပြန်တွေ ဖုံးလို့ သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ကို ပန်းချီဆွဲခဲ့သော ကိုယ်တိုင်ပင်မသိခဲ့...။
သို့သော်လည်း ထိုပန်းချီကားကလေးကို တနေ့ နေ့ တချိန်ချိန်တွင် ပိုင်ရှင်အသစ် တယောက်သာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ထိုပိုင်ရှင် သစ် အနေဖြင့် ပန်းချီကားလေးအလည်မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းကလေးထဲကို သေချာစူးစိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါက
တိမ်လွှာဇာပါးအောက် ရေလွှာသလင်းသားအောက် မျက်နှာပြင်တွင် ခပ်ရေးရေး မြင်သည်ဆိုယုံမျှ ထို ၀ိ ဉာဉ်ကြွေ တစ ကို တခဏ တွေ့ ကောင်းတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်....။
လောဘ ကြီးတဲ့ ပင်လယ်
သောက်ထားတာလေ သူ့ ကိုယ်သူသောက်ထားတာ
ပြီးတော့ လှိုင်းပုတ်တိုင်း ထွီ ကနဲ ထွီ ကနဲထွေးရင်း
အမလေး ငံလိုက်တာ လို့ အမြဲ မြည်တွန်တောက်တီး...။
ကမ်းခြေက သဘာဝအလှတွေ ပြူးပြဲထွက်နေတာ
“မှားတောင်မကိုင်ဘူးကွ”တဲ့ အဲလို ကြွေးကြော်တာ
တခါထဲ ငုံပစ်လိုက်တာကိုး ပြောအားရှိမပေါ့....။
ဗွမ်းကနဲ ဗွမ်းကနဲလဲ အန် အန် ချ
အဲဒီ ပင်လယ်ဝ က မီးပြတိုက်လေး လို
ငါ တယောက်ထဲ ပင်လယ်ကို ငေးနေမိလိုက်တာ..........
ပင်လယ်ဟာ နေ ကို ပါ မြို ချသွားပါရောလား.............။
ခုတော့ ဗုဒ္ဓလဲ ညာ ညှိဖို့ ကြိုးစား ခံလိုက်ရပြီ..............။
လမ်းထိပ်က ခပ်မွဲမွဲ အုတ်ခုံလေးတောင် မြောင်းပုတ်နံ့နဲ့အခြေကျ....။
ဂစ်တာ တစ်လုံးပိုက်ပြီး သီချင်းငြီးတတ်တဲ့
ဘာနဲ့မှ မတူအောင် အခြေကျခဲ့...။
အဲဒီဂစ်တာသံကိုလဲ ဘယ်တော့မှ နားဝင်ချိုဖို့
ဘယ်သူမှ မမျှော်တော့လောက်အောင် အခြေကျခဲ့..။
သူကလဲ ဂစ်တာကို ပိုက်ပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါ
ငယ်စဉ်အခါက အနာဂတ်ကို ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်လို
ငယ်စဉ်အခါက လမ်းထိပ်က ဆရာမ ဖြစ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးကို
အဲဒီ ဗိုလ်စွဲတဲ့ ညနေတွေမှာ
အဲဒီ ဆရာမဖြစ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးဆီက ပန်းကုံးကိုမှ အစွပ်ခံနေကြ
ပြီးရင် ပြုံးစစနဲ့ ကွင်းလည် မှာ ဇော်က က ပြီး
ကလေးနဲ့ ခွေးနဲ့ အကြွေးနဲ့
အခုတော့ အဲဒီ အုတ်ခုံလေးနေရာမှာ
အုတ်ခဲပုံ လေး ညိုကျင့်ကျင့်နဲ့...။
အဲဒီဆရာမလေး ထထ ငေးတုန်း
အရာရာဟာ သူ့ ဟာနဲ့သူတော့အခြေကျနေကြတာပါပဲ
ည နက်ပြီ ဆိုရင်
မျက်ရည်တွေ ဥ တုန်း တဲ့................။
တခါက သိခဲ့ဖူးသော သူ့ ဖခင် ရိုက်သဖြင့် နားကန်းသွားရသည့် လူတယောက် ဘ၀ကို မှတ်မိသမျှ ပြန်လည် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၀ါရွှေရောင် နေလုံးကိုယ်တိုင်က သမ်းပြနေသေးတော့...။
အသဲမာတဲ့ ကောင်မလေးတယောက် လမ်းလျှောက်နေတုန်း
ငါက ငါးခူပြုံးနဲ့ အပူလုံးတွေမြိုချ
စာဗူးတောင်းတကောင်ဟာ ၀ှစ် ကနဲ
လှစ်ကနဲ သပွတ်အူထဲဝင်သွား ရဲ့
“တကယ်ရှုပ်တဲ့သပွတ်အူ ” တဲ့....
ရယ်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ကြက်သေ သေ ကျန်ခဲ့...။
“အင်း” တလုံးနဲ့ အပျင်းဆုံးခဲ့ရ
မိုးနှောင်းသစ်ပင် အပြစ်မတင်ဘူး ။
တရုတ်မကို ဒုက္ခကြားက ကယ်ချင်တဲ့အာဏာ
ဘာမဆိုကို ဘာမဆို ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပစ်နိုင်တဲ့အာဏာ....
ဟောဒီမိုးညမှာ သင်္ကြန်ကျချင်တာက စခဲ့တာပဲ
ကဲ သိပ်ခက်တာပေါ့ ............။
ငါသိတယ်.. ငါဆိုတဲ့ အမဲကင်ကြီးကို
အသည်းဘ၀င်မှာ သင်္ဘောဆေးလိုစွဲ နေပေမယ့်
ဒီတော့ တယောက်ယောက် ကောက်ယူလို ယူစေတော့ဆိုပြီး
ရေစက်မချ လမ်းဆုံလမ်းခွ ချသွားတာလားဟယ်...။
ဒါဆိုလဲ သာဓုပါ ကွယ်
တကယ်က အမဲကင် ယောင်ဆောင်ထားတဲ့
ကိလေသာ ပေကျံတဲ့ အင်တာနက်
အဲဒီ ကျယ် ကုန်တဲ့အထဲမှာ
စကားတွေကျယ်ကျယ်အော်ရတာလဲ ပါမှာပဲထင်ရဲ့ .
ဘယ့်နှယ့် ဝေးကြတာကိုး ..။
ဘ၀ကို ချွတ်ချပြီး မတ်တပ် ကော့ရပ်ပြမယ်။
ဖူးငုံသမျှတွေခူးဖို့ အမြင့်မတက်ဘူး ။
ဘ၀မှာညစာအတွက် အရသာပျက်လောက်အောင် ရုန်းခဲ့ဖူးတယ်
အားလုံးကို ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ကြည့်ဖူးတဲ့ငါ့မျက်လုံးထဲမှာ
ဖရိုဖရဲ စာရိတ္တနဲ့ သိပ်မရွနဲ့ငါ့လူ
ဘယ်လောက်မဟာဆန်တဲ့အချစ် တွေ နဲ့ချစ်ချစ်....
ငါ့ကိုလဲ ငါ့ဆီက လုယူလိုက်ပြန်ပြီ။
ငြိမ်းဇေဦး (Digital art)
(၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်)
ကန္တာရ အလည်က ရှားဇောင်းဆူးပင်တွေလိုလေ
တချို့ က ရေမချိုးပဲ အ၀တ်ခဏခဏချွတ်ချင်လို့
တချို့က ဘ၀တစ်ခုအတွက် အသည်းကိုလက်ဖွဲ့ လို့
တချို့က ချစ်သူနဲ့ တည်ဆောက် တမိုးအောက်
ပြုကြ ပြုကြ ပြုနိုင်တုန်းပြုကြ
ဖြေးဖြေး ပြုကြ ။
ပဋိသန္တာရ စကားတွေ ဥ ဥနေတဲ့
ဥပဲ ဥ နိုင် သူတွေ
အဲဒီအင်္ကျီလေး သိပ်လှတယ်
Come on floozies! I called out
here we haveaparty brought
inspire me with dandy crowd
အဲဒီ စိတ်ကျမှုတွေကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ
အပေါင်ဆုံးသွားပြီ ဒီတော့ အတိတ်ထဲ ဖြဲဝင်လို့
ု ခြင်္သေ့ တကောင်လို ခုန်ကူးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေအတွက်
ငါ့မုတ်ဆိတ်တွေဖြူနေအောင် နေရောင်ကို ငါ မခိုးခဲ့ဖူးဘူး
နေရောင်က ငါ့ကို ဘာဘီကျူးလုပ်ချင်နေတာ ငါသိတာပေါ့
ငါဟာ ကမ္ဘာကို ယက်လုပ်သူမဟုတ်ဘူး
ငါဟာ ကမ္ဘာကို လောက်စာလုံးလိုလုံးသူမဟုတ်ဘူး
စင်္ကြ၀ဠာကြီးက ငါ့ကို ခဏခဏထွေးထုတ်ခဲ့တယ်
စီးကရက်တစ်လိပ်ကို သဂြိ င်္ုလ်လိုက်တယ်
ငါ့ကို မြန်မြန်သဂြိ င်္ုလ် ကြဖို့ ။
ခုတော့ အဲဒီကြိုးဟာ ငါလိုရာ အမြင့်မှန်သမျှ ဘယ်လိုတက်ရမယ်ဆိုတာ
ကဲ ..ကော်ဖီတခွက်တိုက်ပါ စင်္ကြ၀ဠာကြီးရေ
အကျည်းတန်နေတဲ့လှပမှုတွေဟာ တီဟီရန်က အပျိုမ လို ဆိုတာ
being trapped in the wild
'isn't it peculiar?'amellow leaf whispered in rhyme
and swiftly dropping down likeaprisoner on the gallow
and thought surfing without suffering likeasparrow
like the fishing poles
diving tangibly in the dead flow
where human were moving without souls
'isn't it peculiar?'agirl shattered in sorrow
and glittery tears hanging down like the undertaker of her ego
and stopped lurking without asking likeatadpole
covetous eyes are now trying to dig out
cavorting ... cavorting.. like spring's sprouts....
ခင်သမျှကို ရင်ဝသွန်ပြီး ဆက်ဆံတာ
အများဆုံး သုံးခဲ့တာ တဘ၀လုံးမှာ
အခါ တရာမှ ပြည့်ပါ့မလား။
ဘ၀ကို ကျရာနေတဲ့ ရွက်ကြွေပါပဲလား
မသွေ့ သေးသော အငွေ့များ၏ အသံကိုနားထောင်ခြင်း
ပါးစပ်က လှိမ့် လှိမ့်ထွက်လာလိုက်တာ
ဒင်း ဆိုတဲ့ ဟာကြီးက.....။
အပျော်အပျက်နဲ့ ဟိုဖက်က ကောင်လေးကိုတောင်
ကိုယ်ဝန်တားဆေးပါ မတည့်တဲ့အခါ ၀လာတတ်တယ်။
မယုံရင် ထုံကျင်နေတဲ့အချိန် ထပြေးကြည့်
ကမာရွတ်က မာမွတ် သမီးလေးဆိုတာကလွဲလို့
ငါလဲ သေချာ မသိမှတော့
ဒီ စကား ၀ိုင်းမှာ ငါ မပါတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါ့
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံး တွေ တ၀ုန်းဝုန်းပေါက်သလို
လင်လိုမယားလို အချစ်တွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး
အသွေးမလို အသားမလိုတဲ့ သားလိုသမီးလိုအချစ်တွေနဲ့ဆိုရင်
သွေးကြောတမျှင် ဟာ ပေါင်မုန့်တချပ်
အဟာရ သိဒ္ဓိတွေ အစပျိုးရာ
မေတ္တာ ပိုက်လိုင်းကြီးပါ မမအေးရဲ့...။
ည ည တွေးပြီး
သူခိုးရွှေရ တပြပြ မလုပ်မိတဲ့
ဒေါမနဿတွေ ပွားမနေနဲ့ မမအေးရဲ့ ....
လက်ကုန် ကြိတ်ငိုပြီး စိတ်မတိုပါနဲ့ မမအေးရဲ့...။
တခါမှ လူမရောက် ငှက်မနား ယင်ဖိုတောင်ဖြတ်မသွားဖူးတဲ့
အဲဒီ စိတ် သားအိမ် အားကောင်းကောင်းနဲ့.......။
ဘာမှ မကျန်သူ အတွက် မာနအလံထူဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ
ဒါ ဘ၀ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေပဲ
အသည်းနာတာကို ပုလဲ ရတနာဖြစ်အောင်လှည့်ပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိပါကွယ့် မမအေးရဲ့...။
အသည်းကွဲမှု တဧက ကို ရွှေချပြီး ကိုးကွယ်တဲ့အခါ
လွမ်းတာကို က ဘာသာရေးဖြစ်လာတတ်တယ်
မုန်းတာကို က ဘာသာရေးဖြစ်လာတတ်တယ်
ရှုံးတာကိုက ဘာသာရေးဖြစ်လာတတ်တယ် မမအေးရဲ့
ကဲ ...ကလေးလို သန့်ရှင်းသော ၀ိဥာဉ် နဲ့
စိတ်မရှိနဲ့ ညီမ ပိတ်မိတဲ့ဘ၀မှာ
အသာမှေးပြီး တေးတပုဒ်ကိုငြီးနိုင်မယ်ဆိုရင် ..
အဲဒီအခါ ခုလို ကဗျာလေးတွေဖူးပွင့်လို့
ကိစ္စမရှိဘူး သွား ရှိတယ်။
သွားနာတယ် တကယ် မာတဲ့ကြံ။
အရည်ကရွှန်း လူကို လန်းသွားသပ။
အချောင်းအကျစ် ကို တဆစ်ခြင်းခွာ
အသာဝါး ဖြေးဖြေး အရသာခံ
ဘာမှမကျန်တဲ့ အဖတ်တွေ ထွေးထွေးချ။
သြော် ...ဒါနဲ့ ကလေးမရယ်
Burmese family dinner
အာရောဂျံ အသိုး များ
စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုကြ ။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘေးမဲ့တောကြီးပဲ
သားရဲ တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်က
စင်္ကြ၀ဠာကြီးရဲ့ ဇကာပေါက်တွေကို ကောက်ယူ။
ဇွတ် ကို လှချင်နေကြတာ
မနေ့က တညလုံး အိပ်ပျော်ဖြစ်တယ်
အဲဒီအတွက် အသည်းရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ လဲခဲ့ရတယ်
ကစားကွက်တွေ ပျောက်ခဲ့တာ ကြာပြီလေ..။
သူ့ အမေ သန္ဓေသားကိုလွယ်ချိန်မှာ
လော်စပီကာကြီးစားချင်တယ်လို့ ချင်ချင်းဖြစ်ပြီး မွေးလာသလားမသိ
အသံက တော့ အမှန်အကန်ကျယ်တာဟေ့..............။
ဂျမ်းဘုံ မှ ဂျမ်းဘုံ
ဒါပေမယ့် နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကို နမ်းကြည့်
ရေညှိလို ချောမွေ့လို့ သဘောတွေ့ငြိမ်သက်............။
ပါ ပ ဂြိုလ်တွေ ခြေပုန်းခုတ်ချိန်မှာ
မိုးပေါ်က အပ်နဲ့ မြေကြီးက အပ်
ထပ် ကနဲ အရှိန်နဲ့ ထိခဲ့တာပေါ့
တကယ့် မနုဿတ္တဒုလ္လဘ ...။
တည တခါ ဘ၀နာလွန်းတယ်
လူမစွမ်းနတ် မ တဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာလဲ
မဖုံးကွယ်ပဲ သူ့ ရှင်မီးအင်္ကျီကို ဟပြခဲ့တယ်
ရင်ဘတ်က ဒဏ်ရာကို ပလာစတာနဲ့ တောင် မကပ်နိုင်အား...။
မာန နဲ့ ဗျာပါဒများနေတဲ့ သတ္တ၀ါပါ
ရင် ကော့ပြီး မိတဲ့ကြောင်ကို ရင်ခွင်ပိုက်
ကြင်နာလိုက်တာ သူ့ အပြင်ဘယ်သူမှမရှိ
ဟောဒီကြောင်ကလေးကို အမြဲအဖော်လုပ်လို့ရတာပေါ့ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့
မေတ္တာတရားနဲ့ ခဏ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးထားတယ်
၀ယ်လာတဲ့ တကီလာကို ပန်းချီဆရာတယောက်လို
ကမ္ဘာမြေကတော့ သံဝေဂ အထပ်ထပ်နဲ့
နောင်တ သချိုင်္ င်း
တချက်မှ မတုန့်ပြန်ပဲ ငုံ့ခံပေးခဲ့တာပါအချစ်ရယ်
ဆံပင် အနက်ရောင်တလွင့်စာ ကြာတော့ကြာခဲ့ပြီ….။
အဲဒီနေ့က ဘုရားမုဒ်ဝမှာ စက်ဘီးလေးတွေကိုယ်စီရပ်လို့ အုတ်ခုံ ပလက်ဖောင်းလေးပေါ် တန်းစီထိုင်ကြရင်း ဘုရားဝန်းရှေ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်သို့ လာကြသော မြို့ ဂုဏ်ဆောင် ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေးများ ကို တာဝန်အရ ငေးရင်း ထုံးစံအတိုင်း စကားတွေပြောဖြစ် တိုင်ပင်ဖြစ်ကြ၏။
ကွမ်းသမားက ကွမ်းယာ ထုတ်ကို ဖြေကာ ဗမာဆေး နှင့်အာမွှေး ပါသော ကွမ်းယာကို လက်ကမ်းပေး၏ ၊ ဆည်းလည်းသံတို့ က တချွင်ချွင် ခပ်ဝေးဝေး ဘုရားပရ၀ဏ်အတွင်း တနေရာမှ တစုံတစ်ယောက်၏ ဆုတောင်း ခေါင်းလောင်းထိုးသံကလဲ ကားသံ လူသံ မြင်းလှည်းသံတို့ ကြားသို့ဖောက်ထွက်လာ၏ ၊ သူ့ ဆုတောင်း ဘယ်လောက်ပြည့်မည်ကိုတော့
ဘယ်လိုဆုမျိုးကို ဘယ်လို ကာလအတွက်သူတောင်းခဲ့သည်ဆိုသောအပေါ်မူတည်၍ ဆုတောင်းသူနှင့် ဘုရားသာသိပေလိမ့်မည်။
ဂျူဒိုချန်ပီယံ က “မရိုးမရွဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားကြမယ်ကွာ”
“ပိုက်ဆံပါဘူးကွ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တော့
“ငါ တိုက်ပါ့မယ်ကွာ မင်းကလဲ သွားကြမယ်” ဟု ဂျူဒို ချန်ပီယံ ကပြန်ပြော၏။
အမှန်တော့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင် ဆယ်ခါထိုင်လို့ ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်က တခါ မတိုက်နိုင်တဲ့ကောင် နောက်တော့ အားလုံးထဲတွင် ရည်းစားလဲ တခါမှ မထားဖူး ထားရန်လဲ အစီအစဉ်မရှိသည့်ကောင် ၊ ရည်းစား စာပေးကြည့်ဖို့လဲ တီထွင်ဥာဏ်မစူးရောက်ခဲ့ မွဲလှသည့် ဘ၀လေးမှာ တခါထဲ အမဲရိုး နှယ် ဟင်းအိုးမှ အားမနာဟု ပစ်ပစ်ခါခါပြောခံလိုက်ရလျှင် မတွေးရဲ သတ္တိမရှိ ထို့ ကြောင့်လဲဖြစ်သည်၊ ဆိုင်ထိုင်တိုင်းလဲ
သူငယ်ချင်းများက သာ တိုက်သွားကြသည်မှာများ၏ မွဲခဲ့ပုံက အဲသလိုပါ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လက်ဖက်ရည်မှာသောက်ပြီးတော့ ခဏ သီချင်းနားထောင်ကြ၏။
ပြီးတော့ အုပ်စုလိုက် စက်ဘီးလေးများဖြင့် ဘုရားကြီးဖက်သို့ပြန်နင်းလာကာ စောစောက ထိုင်ခဲ့သော နေရာလေးတွင်ပင်ပြန်ထိုင်ဖြစ်ကြ၏။
“ ပပ တို့ ပြောင်းတော့မယ်ကွာ” ဟု စာရေးဆရာ လိုလို ပန်းချီဆရာလိုလို ဘုရားဒကာပေါက်စ က ပြော၏။
“ဟာ ဒါဆို မင်းတို့ဝေးပြီပေါ့ကွ ၊ တခုခုတော့မင်း လုပ်သင့်တယ်နော်” အမြဲတန်းစကားပြောတိုင်း ရယ်တတ်သည့် ရိုးလွန်းလှသည့် ကွမ်းသမားက စပြီးပြောလာ၏။
“အေးကွာ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ” ဘုရားတကာပေါက်စက စကားအဆုံးမှာ ကတ္တရာလမ်းအစပ်မှ ခဲလုံး သေးသေးလေးများကိုကောက်လျှက် လမ်းမပေါ်သို့ တချက်ခြင်း ပစ်နေ၏။
“ ဒါများလွယ်ပါတယ် ..ငါတခုမေးမယ် ကွ အဲဒါမင်းသေချာစဉ်းစားပြီးဖြေ”
ကျနော်က ဆရာကြီးလေသံဖြင့် ဘုရားတကာကိုမေးတော့ ဘုရားတကာက “အေးပြောဘယ်လိုလုပ်မလဲ” ဟု အားကိုးတကြီးမေးလာ၏။
“မင်း.. ပပကို ယူနိုင်သလား ”
“အေး ယူနိုင်တာပေါ့ကွာ သိပ်ချစ်တာပဲ ခြောက်တန်းကတည်းကဖြစ်လာတာမင်းကလဲ”
“ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် ဒီလိုလုပ်ကြမယ်” စကားကို ခနရပ်ကာ
ဗမာဆေးနည်းနည်းများသွားသဖြင့် စပ်ပူပူနိုင်လှသော ကွမ်းယာကို ထွီကနဲထွေးထုတ်လိုက်ရင်း အိတ်ကပ်ထဲမှ ဆေးပေါ့လိပ်တလိပ်ကိုထုတ်လိုက်၏။
“ဟကောင်ရယ် ပြောမယ့်ဟာပြောစမ်းပါ ဈေးက ကိုင်နေသေးတယ်” ဂျူဒိုချန်ပီယံက မနေနိုင်တော့ ၀င်ပြောလာ၏။
“ဟကောင် ဈေးကိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး မူနေတာမဟုတ်ဘူး ဒီကိစ္စမျိုးက သေချာရတယ် တိကျရတယ် နောက်မို့ အကုန် မြွေခြောက်ကိုက်သွားနိုင်တယ်ကွ” ဟု ဖြဲခြောက်လိုက်ပြီး ဆေးလိပ်မီးကို ညှိလိုက်၏။
“ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ ကွက်တိ လုံးဝကျိန်းသေဖြစ်ရမယ် ကွ စိတ်ပညာသဘောအရ” ဟု စကားကိုအစချီလိုက်၏။
“ မင်း ပပ ကိုချိန်းတွေ့ဖို့တောင်းဆိုရင် သူလိုက်လျောနိုင်မလား”
“ကြိုးစားကြည့်ရမှာပေါ့ ၊ သူက တော့လိုက်လျောမှာကျိန်းသေပါတယ်ကွ”
“အေး…ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် အင်္ဂါနေ့ မှာ ချိန်းရမယ် ”
“ခေါ်ရမှာက တို့ မြို့အရှေ့ဖက်ကရွာကလေး ကိုခေါ်ရမယ် ”
“ ကရင်ရွာနားကရွာလေကွာ တဇောင်းကြီးကုန်းကိုပေ့ါ”
“ဟား..ဟား မင်း ဟာကလဲဟုတ်သေးပါဘူး ”
“အော် ငါ့နှယ် ခက်ပါလား အဲဒါ အသေအချာ အကွက်ချပြီးတော့ကို ငါ ရွေးပေးနေတာ မင်း မယုံဘူးလား မယုံရင် ငါ့အစီအစဉ်အတိုင်းမလုပ်နဲ့”
“ဟ ယုံပါတယ်ကွာ ဆက်ပြောပါမင်းကလဲ”
“အေး အဲဒီရွာကိုခေါ် ကောင်းတာကတော့ နေ့လည် မရောက်တရောက်ပေါ့ကွာ အဲဒီရွာက မင်းတို့ အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ ကရင်ကြီး အိမ် ကို ခနတောင်း ရမယ် ပေးပါ့မလား”
“ဟ ပေးတာပေါ့ကွ သူနဲ့ငါနဲ့ က ညီအကို လိုပဲကို”
“အေး ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် မင်း ပပ ကိုခေါ်သွားရမယ် ပီကေ၀ယ်သွားပါ ၀ါးသွားပါ ထပ်ပြီးတော့ လဲ များများဆောင်သွားပါ အဖော် တယောက်မှ သူ့ဖက်က မပါစေနဲ့
မင်းဖက်ကလဲ အဖော်တယောက်မှ မပါစေနဲ့ ကိစ္စက လုံး ၀ စိတ်ချရတဲ့ ဆိတ်ကွယ်ရာကိုဖြစ်နေရမယ်၊ ရွာကိုရောက်တာနဲ့ မင်း က သူ့ ကို အသံ တိုးနိုင်သမျှ တိုးပြီးပြော ဖြေးဖြေးလေးပေါ့ကွာ ဖီးလ်သံနဲ့ ”
“အောင်မယ် စပ်ဖြဲဖြဲလုပ်မနေနဲ့ အဲဒါထိရောက်တယ်ကွ ၊ စကားကိုဖြေးဖြေးလေးပြောပြီး သူ့ကို တဖြေးဖြေး မင်း ဆွဲဖက်လိုက် ဖြေးဖြေးလေးနော် ခွင့်တောင်းရတဲ့အမျိုးထဲမှာချစ်သူကိုဖက်တာမပါဘူး အထူးသဖြင့် ချစ်ဦးသူတွေအတွက်ပေါ့ကွာ အဲဒါက အလိုလို လိုက်လျောပြီးသားတွေ”
“ တော်ကြာပါးကျိုးနေပါဦးမယ် ကွာ” ဂျူဒိုချန်ပီယံက ကြားက ၀င် စကားထောက် လာ၏။
“ဟကောင် ..မင်း စော်နဲ့ချိန်းတွေ့တိုင်း ဘယ်သူ ပေးတဲ့အကြံနဲ့ မင်း ရေတွေဆာလာတာလဲပြောစမ်း”
“အေးပါ အေးပါ ငါ ကပြောပြတာပါ ” ဂျူဒိုချန်ပီယံက စကားနဲရန်ဆဲပြောပြီး သူ့မျက်နှာနားဝေ့ ဝဲလာသော ဆေးလိပ်ငွေ့ များကို လက်ဖြင့် ခါထုတ်နေ၏။
“ဆက်ပြောပါဆရာရယ် အားကိုးပါတယ် ” ဘုရားဒကာပေါက်စက မရိုးမရွ ထပ် တောင်းဆိုလာတော့ ဆေးလိပ်ကို မီးသတ်ကာ မတ်တပ်ထလျှက် စက်ဘီး လက်ကိုင်တွင် ညှပ်လိုက်ရင်း လမ်းပေါ်မှ စက်ဘီး နှစ်စီးဖြင့် တမင်သက်သက် ပဲပေးကာ ခြေခွင် လျှက် နင်းလာသော ကျူရှင် ပြန် ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေးနှစ်ယောက်ကို လှစ်ကနဲကြည့်လိုက်၏။
“ အေး အဲဒီလို မင်းက သူ့ ကိုဖက်လို့ ရပြီဆိုလို့ ကတော့ အသာလေးဖက်ထား လက်က အသေလိုမနေနဲ့ လော်ကယ်ရထားရှန်တိန်လုပ်သလို မင်းလက်တွေက အထက်အောက်စုန်ဆန်ခပ်မှန်မှန်လေးပြေးနေရမယ် နားလည်လား”
“အေး အဲသလိုလုပ်နေရင်း သူ့ နား ရွက်နားလေးကိုသေချာကို ကပ်ပြီးတော့ ပါးစပ်နဲ့တေ့ ပြီးရင် လေသံလေးနဲ့မေး .. ပပ ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ ဟင်လို့ ၊ သူက သိရင်ဖြေမယ် အင်္ဂါနေ့ မသိရင် မင်းကသေချာ သူဖြေနိုင်အောင် မနေ့က တနင်္လာကွာ ဒီနေ့ဘာနေ့လဲဟင်.. လို့ မေး “ဟင်” ဆိုတဲ့နေရာရောက်ရင် အသံကို တိုးနိုင်သမျှတိုးပြီးလျှော့ချရင်းမေးနော် နှာဘူး သံလို့ ခေါ်တာပေါ့ကွာ ၊ အဲလိုမေးလို့သူက အင်္ဂါ နေ့လေ လို့ ပြောရင် သူ့မျက်နှာလေးကိုသေချာကြည့်ပြီး ဘာအင်္ဂါလဲဟင် လို့ တမင်ကို ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့မေး အဲဒါဆို သူက ရှက်ပြုံးပြုံးလာမယ် မင်း စော် ဒုန်းမဝေးဘူး သိလား” နည်းနည်းစကားပြောရတာမောတော့ရပ်လိုက်ရင်း ကွမ်းသမားဆီက နောက်ထပ်ကွမ်းတယာ လှမ်းတောင်းလိုက်ကာ ပါးစပ်ထဲအပြည့်ထိုးထည့်လိုက်ရင်း ခဏ ၀ါးနေလိုက်၏။
“ ဆက်ပြောပါကွ မင်းက သိပ်အိုက်တင်ခံတာပဲ” ဟု ဂျူဒိုချန်ပီယံက ပြောပြန်၏။
“ဟကောင် မင်း စော်နဲ့ တွေ့ ဖို့ အကြံပေးနေတာမဟုတ်ဘူး မင်းငြိမ်ငြိမ်နေ” ဟု ပလုတ်ပလောင်း ပါးစပ်ဖြင့် ပြန် ပြောလိုက်ရင်း ဘုရား ဒကာပေါက်စ ဖက်လှည့်ကာ“ အေး ..ပြီးတာနဲ့ မင်းက ထပ်မေးရမှာက ပပ ဒီရွာနာမည်ဘာလဲသိလားဟင်လို့ မေး၊ သူက သိတယ်ဆိုရင် ပါးစပ်နဲ့အသံထွက်ဖြေခိုင်း မသိဘူးဆိုရင် မင်းက တော်ပါပြီ ပြောမပြတော့ဘူး လို့ ပြော ဒါဆို သူက သိပ်သိချင်လာမယ် သိပ်သိချင်လာတဲ့ပုံမပေါက်ရင်တော့ မင်းက ပြောကိုပြရမယ် အေးလေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းက တဇောင်းကြီးကုန်း လို့အသာလေး ပြောလိုက် ပြီးရင် ပပ ရှေ့အပတ် အင်္ဂါအားလား ဟင် လို့ မေး သူ က ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမယ် အဲဒီအခါ မင်းက လဲ ရိုးရိုးသားသားမေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ မျက်နှာ နဲ့နေ သူက မကြောင်ပဲ ဓါတ်ပေါက်သွားလို့ ရှက်သွားရင် ပပ ရယ် အရမ်းချစ်တယ် မခွဲနိုင်ဘူးဆိုပြီး သူ့ နဖူးလေးကိုနမ်း ပြီးရင်တော့ နှုတ်ခမ်းကို နမ်း ရမယ် သူ ပြန်နမ်းလာမယ် ပြီးရင် မင်း သူ့ ကို အသာတကြည်လေးတောင်းပေတော့ အလုပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် ကွာ”
“အေး ဟုတ်ပြီ မင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်”
ရာသီတို့ပြောင်းလာခဲ့ပေပြီ။ နှစ်တို့ ကြာခဲ့ပြီးနောက်မှ သူငယ်ချင်းချင်း ပြန်တွေ့ ဖြစ်တော့ စကားများစွာ ပြော ဖြစ် ကြရင်း ထိုကိစ္စလေးသို့ရောက်သွား၏
“ မင်းပြောသလိုငါအကုန်လုပ်တယ် ကွာ အားလုံးအဆင်ပြေတယ် နောက်ဆုံးမှာ ပပ ကပြောတယ်ကွာ ကိုကို သိပ် ဆန္ဒရှိရင်တော့ ယူပါ ဒါပေမယ့် ပပ ကိုသိပ်ချစ်ရင်တော့ အချိန်ကိုစောင့်ပါကိုကိုရယ်တဲ့…” သူ့ စကားဆုံးတော့… နွေည လရောင် အောက်မှ ညောင်ပင်အိုကြီးသည် လေရူးဝှေ့ သမျှ သစ်ရွက်တို့ တဝေါဝေါမြည်သံဖြင့် ….။
“ ဆိုတော့.. အလုပ်မဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့” ကျနော်က သိပ် မထူးဆန်းတော့သလို နောင်တရစရာမလိုသလို ခပ်အေးအေးမေးလိုက်၏
“အေးပေါ့ကွာ ငါ မလုပ်ရက်ဘူးလေ ဒါနဲ့ ငါတို့လဲပြန်လာခဲ့ကြတယ်”
“အေး ကောင်းပါတယ် မလုပ်ဖြစ်တာ တကယ်တော့ ” ကျနော် ထိုမျှ သာ ပြန်ပြောပြီးတော့ ဂစ်တာလေးကို သာသာဖွဖွလေး တို့ ထိကစားကာသက်ပြင်း တလွှာခြွေချလိုက်မိ၏။
“ဟေ့ကောင် … မင်းနှယ်ကွာ နေနိုင်လိုက်တာ ဖုန်းလဲမဆက် စာလဲ မရေး
ခြေရာဖျောက်သွားလိုက်တာ ငါတို့ လင်မယားမှာတော့ မင်းအကြောင်းပြောရ သတိတွေရ လို့မင်းတော်တော်နေနိုင်တဲ့ကောင်” ဘုရားဒကာ လူမိုက် ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သော သူငယ်ချင်းက ပြောလာတော့ “အေးကွာ ငါလဲ ဒီလိုပါပဲ ခုမင်းဘယ်လိုလဲကွ အဆင်ပြေလား ”
“အေးကွ အငယ်ဆုံး သမီးလေးရတယ်ကွ ယောက်ခမကြီးဝင်စားတာလေ အကြီးနှစ်ကောင်ကတော့ အေးဆေးပေါ့ကွာ အငယ်မက တအားငိုတယ်ကွ”
“အေး ဟုတ်လား ငါ့တူမက မင်းသမီးဖြစ်ချင်လို့ အငိုကျင့်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာ”
ထိုညက နာရီပေါင်းများစွာ စကားတွေ ပြောပြီး သူလဲ ဖုန်းချ ကိုယ်လဲ ဖုန်းချ ကာ အတိတ်သို့ ပြန်လည် လည်ပတ်ခြင်း ခရီးစဉ်လေးဆွတ်ပျံ့စွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့၏။
ကျနော်သည် ဖြေးဖြေးလေးလေးဖြင့် ထမင်းစားခန်း သို့သွားကာ စားပွဲပုလေးပေါ်တွင် အုပ်ဆောင်းသေးသေးလေးဖြင့် အုပ်ထားသော ပဲဟင်းလေးနှင့် ၀က်သားဟင်းလေးကို နွှေးကာ တယောက်ထဲ တိတ်ဆိတ်စွာ စားသောက်နေမိ၏။
ထိုအချိန်တွင် အလွန် ချစ်စဖွယ်ကောင်းပြီး လှပ ရိုးသားသည့် ကျောင်းစိမ်းစကတ်ကလေးဝတ်ကာ
သနပ်ခါးပါးကွက်ကြားဖြင့် ပျော်ရွှင် ခဲ့ဖူးသော ကောင်မလေးတယောက်သည်လည်း မန္တလေးမြို့ တနေရာတွင် သူ့ သူငယ်ချင်းတယောက်နှင့် သူ့ ချစ်သူ အကြောင်း သူ့ စိတ်ထဲတွင် တွေးဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါလျှင်………………………………….။
အကာအရံခုနှစ်လွှာနဲ့ အဇ္ဈတ္တကို မဆင်မြန်းတတ်တာ
အေးအေးဆေးဆေး နစ်မြုပ်ခွင့် ရနိုင်ကောင်းရဲ့ ဆိုပြီး
သူ့ကိုအားကျနေတဲ့ ၀င်ကစွပ်ကောင်ကိုတောင် နှုတ်မဆက်ပဲ
အနှေး က ကွက်တွေနဲ့ ……..။
နှာခေါင်း ရှုံ့ တာ မြင်တိုင်း
စာရေးဆရာဗိုလ်မှူး သော်က (တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃)ပြောသောပံ...